SEKUQINISEKISIWE ukuthi uyaphela umdlalo, Isibaya njengoba sekuvele ukuthi inkampani iBlack Brain, iqopha umdlalo omusha oyitelenovela, ozovala isikhala sawo. Isithombe: Sigciniwe
Nokubongwa Phenyane | January 15, 2021
UMZANSI Magic ugcine ukuqinisekisile ukuphela komdlalo Isibaya, obese kunesikhathi Isolezwe libika ngokuphela kwawo.
Bekunezinkulumo zokuthi ukungenzi kahle kwalo mdlalo ezibalweni kubabukeli yikhona okwenze waqedwa.
Izolo uMzansi Magic uveze ukuthi kubuhlungu ukuphela komunye wemidlalo yabo odumile, nobuthandwa kakhulu kuleli.
“NjengoMzansi Magic, sijabule ukwazisa ababukeli bethu ngobudlelwane esesinabo nenkampani kaMandla N, iBlack Brains Productions. Le nkampani izoletha umdlalo omusha ozovala isikhala seSibaya, ozosivala thaqa isikhala esizovuleka. Okusijabulisa nakakhulu ukuthi lo mdlalo uzoba uhlobo esilubiza ngetelenovela, olungolokuqala ukuthi lwenziwe yile nkampani yenzela isiteshi sethu,” kusho uNomsa Philiso obhekele izinhlelo zakuleli kwaMnet.
Uthe leli ithuba elihle leBlack Brains likukhombisa amakhono ahlukene kuleli ngalo mdlalo. “Thina njengesiteshi sisiza bona ophrojusa ukuthi bakhule futhi basize intsha efuna ukukhula kulo mkhakha iqhakambise amakhono ayo,” kuchaza uNomsa.
Kuvela lezi zindaba nje, Isolezwe lisanda kubika ukuthi uThandeka Dawn King uyashiya emdlalweni Uzalo njengoba ethole amadlelo amasha eGoli. Sekuvele ukuthi uThandeka ungomunye wabadlali abazolingisa indawo ephambili emdlalweni omusha oqoshwa yiBlack Brains Production.
UThandeka ukuqinisekisile kweminye imithombo yabezindaba ukuthi ngempela uyashiya kuZalo kodwa akachazanga ukuthi uyaphi.